निद्रा किन लाग्छ र ननिदाउँदा के हुन्छ ? | Ratopati
personनरनाथ पाण्डे exploreकाठमाडौं access_timeमाघ १९, २०७५ chat_bubble_outline0
निदाउनु भनेको मस्तिष्क र शरीरलाई आराम गराउन आँखा चिम्लिएको र पूर्णरूपले चेतनाविहीन अवस्था हो । बेलुका चाँडै सुत्ने र बिहान चाँडै उठ्ने बानी नै शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको सूचक हो । यदि निद्रा पुगेन भने व्यक्तिको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा अवरोध आउँछ । निद्रा एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो, जसले शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको समेत वृद्धि गराउँछ । निद्रा कम लाग्नु पनि शारीरिक वा मानसिक रोगको लक्षण हुनसक्छ । त्यसकारण आवश्यकताअनुसार पर्याप्त सुत्नुपर्छ, जसले व्यक्तिलाई सदा स्फूर्त, क्रियाशील र स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ । कुनै पनि व्यक्तिको स्वस्थताको प्रमुख सूचकका रूपमा रहेको निद्रा किन लाग्छ र राम्रोसँग ननिदाउँदा हुने हानिका विषयमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
निद्रा लाग्ने कारण र आवश्यकता
निद्रा प्रत्येक मानिस, पशुपक्षी र जीवित प्राणीका लागि अति आवश्यक छ । सबै प्राणीहरू आआफ्नो प्राकृतिक समय र जैविक प्रक्रिया अनुरूप निदाउने गर्छन् । सुताइ र निदाइ भन्नु फरक कुरा हुन् । कोही व्यक्ति मस्त सुत्छ तर मस्त निदाउन सक्दैन भने त्यो राम्रो सुताइ होइन । मानिसले सपना देखेको बखतको सुताइलाई पनि राम्रो निदाइने होइन भन्ने कुरामा वैज्ञानिकहरू पनि सहमत छन् । किनकि सपना देखिरहँदा पनि मस्तिष्क सक्रिय भइरहन्छ ।
विकिपिडियामा उल्लेख भएअनुसार सपना देखिने सुताइमा आँखा तीव्रतर तरिकाले चलिरहेको हुन्छ र मस्तिष्क सक्रिय हुन्छ । यो अवस्था निदाएको करिब ९० मिनेटपछि सुरु हुन्छ । तर मस्तिष्कलाई आराम गराउन सुत्नुपर्छ भन्दैमा दिउँसोमा सुत्नु, जतिबेला पनि सुत्ने मन गर्नु, अल्छी गरेर सुतिरहनु, अलि बढी नै सुत्नु आदि स्वस्थकर सुताइ होइनन् । यसरी अनावश्यक रूपमा बढी सुत्नु पनि शारीरिक वा मानसिक समस्या हुनसक्छन् । खासगरी बढी निदाउनुमा रक्तचाप न्यून हुनु, ज्यादै गर्मी हुनु, कमजोर वा शक्तिहीन हुनु, मोटोपन बढ्नु जस्ता आदि कारणहरूले गर्दा हो । यस्तो भएमा विभिन्न प्राणायाम गर्ने, शरीर मालिस गर्ने, टिमुर चुस्ने आदि गर्न सकिन्छ । यसर्थ निद्रा लाग्नु मस्तिष्कको आराम र विश्रामका लागि हो । मस्त र गहिरो निद्रा परेको बेला आँखा बढी मात्रामा चलेको हुँदैन र यस्तो अवस्थामा शरीरका ग्रन्थीले वृद्धि हर्मोन र दूध उत्पादन गर्ने हर्मोन उत्पादन गर्दछन् । त्यसकारण मस्त निद्रा सुत्ने बच्चाको शारीरिक वृद्धि विकास समेत राम्रो हुन्छ ।
- मांशपेशीको दुखाइ, टाउको दुखाइ र थकाइ हुने ।
- स्मरण शक्तिको ह्रास हुँदै जाने ।
- चिन्ता, तनाव, मानसिक समस्या र डिप्रेसन हुनसक्ने ।
- दु्रत निर्णय प्रक्रियामा असर पर्ने ।
- हात काम्ने, आँखाको डिल सुन्निएको देखिने, रक्तचाप बढ्ने, तनाव बढाउने हर्मोनको तह बढ्ने, आँखाको अनियमित चाल देखापर्ने, झर्किने र छटपटाहट हुने ।
- मधुमेह रोगको खतरा हुने ।
- रोगविरुद्ध लड्ने प्रतिरोध क्षमतामा कमी आउने ।
- मोटोपन हुने ।
- विध्वंशपनको विकास हुने र समग्रमा असल व्यक्तित्वमा असर पर्ने आदि ।
ग्रीष्म ऋतुबाहेक अन्य कुनै पनि ऋतुमा दिउँसो सुत्नु हानिकारक छ । आयुर्वेदका अनुसार दिउँसो सुत्नाले मानसिक क्षमता र स्मरण शक्ति कमजोर हुने, कर्मेन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रिय दुर्बल हुने, शरीरले विषाक्त पदार्थ बाहिर निकाल्न नसक्ने भनाइ पाइन्छ । आधुनिक मान्यताअनुसार दिउँसोको केही छोटो सुताइले शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा ऊर्जा प्राप्त हुने भएकाले यस्तो सुताइलाई पावर न्याप पनि भनिन्छ । पावर न्यापका लागि केही समय सुत्नुलाई पनि नराम्रो मानिँदैन । तर राति राम्रो निद्रा नपर्ने समस्या छ भने यस्तो पावर न्याप दिउँसोमा लिनुहुँदैन । मस्त निद्रा नपर्ने समस्या ९क्ष्लकयmलष्ब० भन्नाले राम्रोसँग सुत्दा पनि ननिदाउनु, राति राम्ररी ननिदाई जागिरहनु, एकाबिहानै उठ्नु वा चैनपूर्वक सुत्न नसक्नुलाई बुझिन्छ ।
ससाना कार्यलाई उपेक्षा गर्नाले जीवन नै अस्तव्यस्त बन्छ । खानु, पिउनु र सुत्नु आदि निकै साना र स्वतः सम्पन्न हुने कार्य हुन् तर स्वस्थ रहनका लागि यी कार्यहरू नियमपूर्वक ठीक ढङ्गले गर्नुपर्छ । के हामी ठीक समयमा खाने, सुत्ने र उठ्ने गर्छौं ? यदि यी तीन कुराहरूलाई उचित समयमा व्यवस्थापन गर्न सकिएमा स्वास्थ्यमा सुधार हुन्छ । समयमा खाना नखानाले, समयमा नसुत्नाले र समयमा आफ्ना नित्य कार्य सम्पन्न नगर्नाले शारीरिक शक्तिमा ह्रास आई बिरामी परिन्छ । अतः निद्रामा समस्या आइहालेमा पनि परामर्श र उचित उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।